Channel-Mandalay| The Runners (2020)
လူတွေဟာနေ့စဥ်ဒုက္ခ‌တွေ သုခတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ အဲ့လိုဒုက္ခတွေထဲမှာ သေကွဲရှင်ကွဲတွေက အဆိုးဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ ရိုင်ယန်ဆိုတဲ့အကိုတစ်ယောက်က ငယ်စဥ်ထဲက မိဘ၂ပါး ဆုံးပါးသွားပီးနောက် အကိုကြီးအဖရာဆိုတဲ့အတိုင်း ညီမလေးဇိုဝီဆိုတဲ့၁၇နှစ်အရွယ်ညီမလေးကို အရမ်းချစ်ပီးမဖစ်သင့်တာ မဖစ်အောင် ထိန်းကျောင်းရင်း တစ်နေ့မှာလွတ်ထွက်သွားပီးနောက် သူ့ညီမဟာပါတီတစ်ခုကိုသွားရင်းနဲ့ လူကုန်ကူးတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ကူညီသလိုလိုနဲ့ ဒုက္ခမျိုးစုံပေးတတ်တဲ့ သူမမျိုးဆိုပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်၊ အဲ့လိုနဲ့အကိုကြီးအဖရာအနေနဲ့ရိုင်ယန်ကပျောက်သွားတဲ့ ညီမလေးကိုရှာပေးဖို့ ရဲစခန်းကိုတိုင်ပေမဲ့ အဖက်လုပ်မခံရတဲ့နောက် သူငယ်ချင်း ကူတာနဲ့ရှာပုံတော်ထွက်ပါတော့တယ်။
ဇာတ်လမ်းအဆုံးမှာသူတို့ပြန်တွေ့မလား? ဘာတွေကောဆက်ဖစ်မှာလဲ? ဘယ်သူတွေကကောဘယ်လိုတွေဖြစ်ကြမလဲ?
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ အရောင်စုံလူတွေရဲ့စိတ်ထားတွေ အကုန်ကိုလှလှပပရိုက်ပြထားပီး လူတွေရဲ့ရက်စက်မှုကြောက်စရာကောင်းမှု သနားစရာအကိုတစ်ယောက်ရဲ့ပူဆွေးမှု အကူအညီမဲ့နေတဲ့ညီမတစ်ယောက်ရဲ့ တမ်းတမှုကြောက်ရွံ့မှု ပြန်ပေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ရက်စက်မှု အကုန်လုံးကိုလှလှပပရိုက်ပြထားပါတယ် …